सम्मोहन सम्पत्तिको- फिचर - कान्तिपुर समाचार
धनतेरस, लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर सुन, गरगहना, सिक्का किन्ने र पूजा गर्ने भनेकै धनप्रति सम्मोहन हो । पुँजीवाद पूर्ण विकास भएको ठाउँमा यो खाले प्रचलन छैन । त्यहाँ उत्पादनलाई सघाउने वस्तु र उत्पादनलाई पूजा गरिन्छ ।
कार्तिक ८, २०७६ सुरेश ढकाल
निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति १० हजार वर्षअघि कृषि युगसँगै सुरु भएको हो  । टर्की, जोर्डन, इराकतिर कृषिको उत्पत्ति भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ  ।
खेती गर्न निश्चित क्षेत्र चाहियो । खेती गर्न थालेपछि अतिरिक्त उत्पादन पनि हुन थाल्यो । यसलाई मौज्दात गर्न थालियो । मेरो–तेरो सम्पत्ति भनेर छुट्टिन थाल्यो ।
पहिला घुमन्ते हुन्थे मान्छेहरू । १० हजार वर्षअघिबाटै परिवारको महत्त्व पनि बढ्दै गएको हो । मान्छेले परिवार र आफूले खेती गर्ने क्षेत्रको सुरक्षा गर्न थाले । खेतीपाती, परिवारको अवधारणा बलियो हुँदै गयो । धन र यसको महत्त्व निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै सुरु भयो । त्यसभन्दा अगाडि ढुंगे हतियार सम्पत्ति मानिन्थे । ढुंगे हतियार शक्तिको स्रोत थियो तर धनको महत्त्वका रूपमा थिएन । जब धनको सुरक्षाका लागि लडाकु, जनसांख्यिक समूह बन्न थाले, यसले राज्य–राज्य बनायो । धनको अवधारणा र महिमा नै यहीँ सुरु भएको हो । बिहाबारी तथा अन्य सम्बन्धका काम गर्दा गोठ कत्रो छ, कति खेत छ भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो । गोठ र खेतबारी अन्तरसम्बन्धित हुन्थे । धेरै खेत हुनेको ठूलै गोठ र ठूलो गोठ हुनेको धेरै खेत हुन्छ भनेर बुझन्थ्यिो ।
धन पनि विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । उत्पादन प्रणालीमा श्रम पनि धन हो । श्रमलाई सहज गराउने हलो, गाई गोरु अथवा आधुनिक मेसिन पनि धन हुन् । यिनीहरूको सहयोगबाट हुने उत्पादन धान पनि धन हो । धनप्रति धन्य हुने परम्परा पनि कृषि युगमै सुरु भएको हो । गाई, गोरु, हलोले धन सिर्जना गरेकै कारण धन्य हुने अथवा पूजा गर्ने चलन बसेको हो । नयाँ उत्पादनलाई पनि पूजा गरिन्छ । अहिले पनि धान काटिसकेपछि पूजा गर्ने अथवा न्वागी खाने गरिन्छ । दही चामल बनाएर गाउँभरि प्रसाद बाँड्ने गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ अन्न खाइन्छ । धनलाई पूजा गर्ने संस्कार यसरी सुरु भएको हो । अरू ठाउँमा पनि नयाँ बाली भित्र्याइसकेपछि यस्तै चालचलन हुन्छन् ।
अहिले पनि हामी सांकेतिक रूपमा मात्रै गाई तिहार, गोरु तिहार मनाइरहेका छौं । तराईमा हलोलाई पूजा गरिन्छ । पहाडमा भकारी पनि पुँजिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि धन पुँजीका रूपमा परिणत भएको छ । धन र पुँजी फरकफरक विषय हुन् । अहिले समाजको सम्मोहन पुँजीप्रति बढी देखिन्छ । तर, खासमा पुँजीको काम धन सिर्जना गर्ने हो । यसमा पनि श्रमको अवमूल्यन हुँदै गयो । मेसिनमा लगाव बढ्दै गयो । मेसिन र पुँजी अनिवार्य मान्न थालियो । त्यसपछि पैसा अर्थात् नोटलाई पूजा गर्न थालियो । यो समाजको परिर्वतन हो । पैसालाई पूजा गर्नु भनेको सम्मोहन हो । धनतेरस, लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर सुन, गरगहना, सिक्का किन्ने र पूजा गर्ने भनेकै धनप्रति सम्मोहन हो । यो नभई केही पनि हुँदैन भनेर ‘ग्ल्यामराइज’ गरिएको हो । पुँजीवाद पूर्ण विकास भएको ठाउँमा यो खाले प्रचलन छैन । त्यहा उत्पादित वस्तुलाई पूजा गरिन्छ । पैसालाई गरिँदैन । हामीले चाहिँ हिजो धनलाई पूजा गर्ने गरेको चलनबाट आएकाले परिवर्तित अवस्थामा पैसालाई गर्न थाल्यौं । यो अलि मिलिरहेको छैन । हिजो धनप्रति धन्य होइन्थ्यो । अहिले सम्मोहन देखाइन्छ ।
मध्यपहाडी क्षेत्रमा खासगरी धनतेरस प्रभावित संस्कार हो । कतिपय अवस्थामा यसलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भन्नुपर्ला । विशेषगरी भारतीय संस्कारको प्रभाव हो । पछिल्ला २० वर्षमा हिन्दी टेलिसिरियल हेर्न नपाएको भए महिलाले लगाउने मंगलसूत्रको विषयमा थाहा हुने थिएन । धनतेरस पनि थाहा हुन्थेन । छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव हो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा एउटा खालको र तराईमा अर्कै प्रकृतिको संस्कृति छ ।
हाम्रो खासमा लक्ष्मीपूजा मात्रै हो । त्यो पनि अन्न भित्र्याएपछि भकारी पूजा गर्ने हो । अहिले पनि जस–जसले खेती गर्छन् भकारीकै पूजा गर्छन् ।
अहिलेको अभ्यासले पुँजी आर्जन गर्छ कि धनप्रति आशक्ति मात्रै बढाउँछ भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । मेरो बुझाइमा धनप्रति आशक्ति मात्रै बढाउँछ । नगद राखेर, गरगहना किनेर कोठामा मौज्दात गरिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छैन । पश्चिमाहरूले पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँछन्, थप पुँजी बढाउने वातावरण बनाउँछन् । यो पुँजीवादी सोच हो ।
पुँजी भन्ने बित्तिकै अर्थशास्त्रको विषय आउँछ । अर्थशास्त्रीले ध्यान नदिएको तर हामी मानवशास्त्रीले जोड गरिरहेको अर्थशास्त्र विषय सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, वातावरण र प्रचलनमा टाँसिएको हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक पाटो हटाएर आर्थिक पाटो मात्रै हेर्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिले भइरहेको खर्च, कारोबार, धनतेरस वा लक्ष्मीपूजा अर्थशास्त्रसँग मात्रै जोडिएको छैन, सांस्कृतिक र सामाजिक विषयसँग जोडिएको छ । धन कमाउनुपर्छ वा आशक्ति हुनुपर्छ भनेर सिकाउने पनि सांस्कृतिक चेत हो । पैसा कमाउनुपर्छ वा धनी हुनुपर्छ भन्नु सांस्कृतिक चेत हो । यसको अभ्यास भइरहेको छ । व्याख्या गरिरहेका छैनन् । ‘द प्रोटेस्टान्ट इथिक्स एन्ड स्पिरिट अफ क्यापिटलिजम’ पुस्तकमा म्याक्स वेबरले पश्चिमाहरूले यसैगरी विकास गरेको पुँजीवादको विषयमा व्याख्या पनि गरेका छन् । ‘तपाई धेरै कमाउनुस्, कमाएको केही अंश चर्चलाई दिन सक्नुहुन्छ, जति धेरै दिनुहुन्छ त्यति धेरै धन आर्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । बढी आर्जन गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, जसले धेरै धन कमाइन्छ । यसले पुँजीवादलाई गति दिन्छ भन्ने हो । तर, वेबरले भनेअनुसार हामीले सांस्कृतिक चेतले धेरै मिहिनेत गरेका हौं । श्रमिक र उद्योगपतिहरू भगवान्लाई खुसी पार्न गरिरहेका छौं मात्रै भन्छन् । त्यसकारण सास्कृतिक चेत अनुसार धन कमाउन अभ्यास गरिरहेको हुन्छ, महसुस गरेको हुँदैन । यतिवेला अर्थशास्त्र, मानवशास्त्रको काम आउने हो । जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा संस्कृति जन्मिएको हो । त्यसपछि अर्थतन्त्रमा टाँसिएको हो ।
वर्णसंकर संस्कृतिका रूपमा पैसालाई पूजा गर्ने गरिएको हो । पूर्ण रूपमा परम्परालाई छाड्न सकिएको छैन, पुँजीवादी मूल्य मान्यतालाई ग्रहण गर्न पनि सकिएको छैन । पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने चरण पार गरेर जानुपर्छ । औद्योगिकीकरण, उत्पादन, नाफा, पुँजी परिचालनमा जान सकिरहेका छैनौं । अब त्यतातिर जानुपर्छ । अहिले भाडा खाने तथा बिचौलिया प्रवृत्तिमा धनको आशक्ति छ । कुनै कम्पनीको सेयर वा जग्गा किन्ने, पुर्जा र सेयर प्रमाणपत्र राखेर पूजा गर्ने प्रवृत्ति छ ।
खासमा धन कमाउने चेत ग्रहण नगरी सकेको अवस्था छ । न यता न उताको अवस्था हो यो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र भएको छैन । यसलाई हेरेर पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाको चित्रण गर्न सकिन्छ । एउटा विन्दुबाट हामी छुटिसकेका छौं, अर्को विन्दुमा पुगेका छैनौं । भाडा उठाएर, बिचौलिया गिरी गरेर कुत खाने प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी छ । पैसालाई मात्रै महत्त्व दिने अरू केही पनि मतलव नगर्ने संस्कार विकास भएको छ । जस्तै– पहिला पहिला देउसी–भैलो खेल्न जाँदा धान–चामल, सेल र केही पैसा दिने चलन थियो । अहिले धान–चामल दियो भने रिसाउँछन् । भोक लागेको रहेछ भने रोटीसम्म खान्छन् । यो समाजको एउटा चरित्र हो, जसरी पनि धन कमाउने प्रवृत्ति छ ।
पैसा जसरी पनि चाहियो भन्ने एउटा पाटो उपभोक्तावादी संस्कृति हो । यो पुँजीवादकै चक्रभित्र पर्छ । बलियो राज्य र उसको नीति नियमले जसरी पनि धन कमाउने प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै सांस्कृतिक पक्षहरूको अध्ययनमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । विदेशी तथा राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र समानुपातिक लाभ वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । हामी आफ्नै पुँजीले लगानी गर्न सक्दैनौं भने वैदेशिक पुँजी ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्‍यो । नाफाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो । यसो भयो भने मान्छे उपभोक्तावादी पनि हुन्छ, उत्पादन गर्छ, ज्याला कमाउँछ, जसले फेरि पुँजी परिचालन गर्छ । यसले पुँजीवादको सम्पूर्ण चक्र पनि पूरा गर्छ । उपभोग गर्ने, कमाउने र कमाउनका लागि लगानी गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो राज्यको अहिलेको उदार अर्थतन्त्रको चरित्रअनुसार त्यो दिशामा जाला भन्नेमा आशावादी छु । तर, उत्पादन गर्ने, नाफा कमाउने र नाफा वितरणको सुनिश्चय यथार्थमा आधारित छैन । सपनामा आधारित राजनीति चलिरहेको छ । तत्कालीन माओवादीले विभिन्न एजेन्डा बोकेर द्वन्द्व गर्‍यो । यथार्थ के हो भन्ने अहिले महसुस गरिरहेको छ । महसुस गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । चुस्त कर्मचारी संयन्त्र, नैतिकवान् राजनीतिक संस्कार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको ग्यारेन्टी गर्ने काम हुन सकेको छैन ।
तिहारको एक सातामा सुन र चाँदीका समान किन्न भीड हुन्छ । सुन किन्नु, लगाउनु संस्कृति मात्रै हैन, प्रदर्शन पनि हो । हाम्रो समाजमा खासगरी धन शक्ति आर्जनसँग पनि जोडिएको छ । पश्चिमाहरूमा यस्तो संस्कृति छैन । ‘पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यता नेपालमा छ । यो आशक्ति हो । पश्चिमाहरूमा पनि धनलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँडेका हुन्छन् । तर, शक्ति र आशक्तिका लागि हैन । शासन र सौखका लागि प्रयोग गर्दैनन् । थुपारेर पनि राख्दैनन् । लगानी नै गर्छन् । हाम्रोमा धन थुपारेर राख्नुको कारण सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु हो । पश्चिमालाई शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले निःशुल्क गरेको हुन्छ । खानपिन र घुमघामका लागि मात्रै धन प्रयोग गर्छन् ।
हाम्रोमा बाउबाजेको नाम, धर्म, घर र सम्पत्ति के कति छ भनेर मापन गर्ने गरिएको छ । यसले घर अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने मान्यता विकास गरेको छ । अलिकति पैसा भयो कि घरजग्गा जोड्न सुरु हुन्छ । घर बनाउने र भाडा लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति कायमै छ । भाडा संस्कृतिको धन पनि हाम्रोमा भोलि छोरानातिका लागि चाहिन्छ भनेर ‘होल्ड’ गरिरहेका छौं । मेरो छोराको शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिन्छ भने मैले कमाएको पैसा मेरा लागि मात्रै खर्च गर्छु, नाफा हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्छु । जति धेरै पैसा म खर्च गरिन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसकारण धनलाई लगानीमा परिणत गर्न पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा र नाफा कमाउने निश्चितता गरिदिनुपर्छ । यस्तो विषयको स्पष्टता राज्यले गरिदिने हो । नाफा कमाउने शक्तिशाली नीति ल्याउनेबित्तिकै हामीमा पनि परिवर्तन आउँछ । खासगरी नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने पूजा गर्ने संस्कृति रहिरहँदैन । सांकेतिक रूपमा त यस्ता पूजाआजा भइरहन्छ । तर, समयक्रमअनुसार परिवर्तन हुन्छ । जस्तै पहिला गोदान गर्नुपर्दा गाई नै दान गर्नुपथ्यो । केही समयअघि गाई भएको पैसा दान गरियो । अहिले पुरोहितले गोदान गर्ने भन्ने बित्तिकै ‘१ सय ५ निकाल्नुस्’ भन्ने चलन सुरु भएको छ । पुँजीवादको चक्र पूरा भएपछि अहिलेको जस्तो हैन, अर्कै प्रकृतिको संस्कार विकास हुनेछ । त्यसकारण पैसालाई आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै हैन सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले जोडेर हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको आँखाले मात्रै नीति नियम बनाउनु हुँदैन । धन कमाउने, लगानी गर्ने, नाफा आर्जन गर्ने र त्यसलाई फेरि लगानी गर्ने गरी संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । यो राज्यको चरित्र र प्रभावकारितामा भर पर्ने कुरा हो । हाम्रो राज्य पनि त्यही बाटोमा छ । कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ ।
(कृष्ण आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ १२:३५
इतिहासमा महिलाहरू किन अदृश्य ?
वैशाख २८, २०७६ सुरेश ढकाल
गत साता मातातीर्थ औंसी थियो । यसै उपक्रममा भावनाले लछ्रप्पै भिजेका केही साहित्यहरू लेखिए, छापिए, ती सुन्दर थिए । यसकै वरिपरि पौराणिक श्लोक, कथाहरूका फुनरोक्ति गरेर हामी मातृशत्तिको उपासना गर्थ्यौं वा गर्छौं भनेर दावा पनि गरियो ।
मातृपहिचानसहितको वंश परम्परा पनि हुन सक्छ नि भन्दा किन त्रसित हुन्छौं भन्नेबारे खासै प्रश्न भने गरिएन । केवल नेपथ्यमा मातृशक्तिको भक्तिगान गुन्जिरह्यो । त्यस्तै केही व्याख्या वृत्तान्तबाट प्रभावित भएर, केही मिथकहरूमा विश्वस्त बनेर र सायद केही भावनामा बहकिएर पनि अरू कोही विश्वास गर्छन् कि एकादेशमा मातृसत्ता थियो । मिथकहरू आवश्यक हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ यस्ता मिथकहरूले आवश्यक सन्धानलाई निरुत्साहित गर्छन् ।
जहाँसम्म अहिले पितृसत्तापोषित समाजमा फेरबदल ल्याउनुपर्नेछ, महिलाको राजनीतिक र आर्थिक सत्तामा पहुँच र नियन्त्रण बढाउनुपर्नेछ भन्ने सवाल कुनै मिथकमा आधारित भैरहनु पर्दैन ।
मानवशास्त्रीहरूले अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो प्रमाण प्राप्त गरेका छैनन् जसले विगतमा कहीं कतै मातृसत्ता थियो भन्ने प्रमाणित गरोस् । यद्यपि केही मानवशास्त्रीरूरु छन् जसले कृषि युगभन्दा पहिला, सिकारी युगमा सबैतिर मातृसत्ता थियो भन्ने गरेका छन् ।
जर्मन–स्विस शास्त्रीय विद्वान् जोहान ज्याकोव बाकोफेन (इ. १८६१) ले जिरह गरे कि पितृसत्ताको रजाइभन्दा पहिला मातृसत्ता थियो । उनको यो थेसिसले त्यसपछिका वर्षहरूमा सामाजिक संस्थाहरूको उद्विकासबारेका अवधारणा बनाउन भूमिका निर्वाह गर्‍यो । सायद मातृसत्ताको ‘मिथक’ स्थापित गर्ने सबैभन्दा पहिलो र शक्तिशाली प्राज्ञ उनै थिए ।
बाकोफेनलगत्तै अमेरिकी मानवशास्त्री लिविस हेनरी मोर्गन (एनसिएन्ट सोसाइटी, इ. १९७७) ले उत्तरी अमेरिकी आदिवासी इरोक्विसहरूको अध्ययनबाट निचोड निकालेका थिए कि पाषाणकालीन समाजमा महिलाको स्थिति उच्च थियो । आर्थिक सहभागिता र राजनीतिक सक्रियता अधिक थियो र सन्तान आमा गोत्र जान्थे ।
मातृसत्ता सुरुआती अवस्थामा थियो । पितृसक्ताले त्रमश: मातृसत्तालाई विस्थापित गर्‍यो । उनको बुझाइ थियो कि मातृसत्ता सामूहिक सम्पत्तिमा र बहुपति प्रथामा आधारित थियो । तर मोर्गनले जे जति प्रमाण र तर्क अधिसारेका थिए ती पर्याप्त थिएनन् जसले महिलाको आर्थिक र राजनीतिक अधीनसहितको मातृसत्ता थियो भन्ने तथ्य स्थापित गरोस् ।
उनै मोर्गनबाट अधिक प्रभावित भएर फ्रेडिरक एंगेल्सले परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति (इ. १८८४) मार्फत तर्क गरे कि कृषिको सुरुआतसँगै निजी सम्पत्तिको अवाधारणाको पनि उत्पत्ति भयो र पछि त्यो पुरुषको नियन्त्रणमा जान थाल्यो । त्योभन्दा पहिला सामूहिक सम्पत्तिमा महिलाको नियन्त्रण रहन्थ्यो । उनको यो दाबीले त्यसपछिका विद्वतविमर्शमा अत्यधिक प्रभाव पारिरह्यो । अहिलेसम्म पनि । स्वाभाविक हो नेपालसम्म पनि त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै थिएन । मार्क्सबादबाट प्रभावितहरूमो यो मत अझै प्रवल देखिन्छ ।
सिगमन्ड फ्राइडसमेत सुरुआती मातृसत्ताको अस्तित्व थियो भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे । युरोपेली पुरातत्त्वविद् मारिया गिम्बुटासले त कुनै समयमा युरोपभरि नै मातृसत्ता मूलचरित्र थियो भनेर वकालत नै गर्थिन् । युरोपको प्राज्ञ जगत्मा उनको राम्रै प्रभाव थियो । के कुरा पुन:स्मरण गरौं भने हामीले हाम्रो विगत वा इतिहासको निर्माण विशुद्ध परिकल्पनाका आधारमा गरेका हुँदैनौं, न त केही मिथकका आधारमा मात्र पनि ।
खास भौतिक प्रमाण: पुरातात्त्विक अवशेषका आधारमा विगतको समाजको पुनर्निर्माण गरिन्छ । प्रश्न त्यति मात्र हो कि ति कुन त्यस्ता प्रमाणहरू हुन् जसले कुनै बेला मातृसत्ता थियो भनेर परिकल्पना गर्न सघाउँछ वा बताउँछ ?
के मातृसत्ता थिएन भन्नु, पितृसत्ता थियो झन्नु हो ? के संयँक्तसत्ता हुन सक्दैनथ्यो ? संयुत्तसत्ता भनेको कसैको पनि सत्ता हैन भनेको हुन्छ कि हुँदैन ? कोही न कोही सत्तामा भएन भने संसार चल्दैन ? महिला र पुरुषबीच समानता भएको, समान हैसियत भएको समाजमा कसको सत्ता चलेको हुन्छ ?
थाहा छ यी प्रश्नहरू तपाईंलाई सान्दर्भिक नलाग्न सक्छन् । उपयोगहीन पनि लाग्न सक्ला । तर बारम्बार यही प्रश्न सामना गर्नुपर्‍यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? यदि तपाईंलाई यी प्रश्नहरू सान्दर्भिक लागे भने त्यो केवल संयोग मात्र हो ?
हिजो मातृसत्ता थियो कि थिएन भन्ने प्रमुख चासो हो, प्रमुख मुद्दा होइन । थियो भन्ने मान्यता नै राख्ने हो भने त्यसको पुन:स्थापना त पक्कै अहिलेको मुद्दा होइन । मुद्दा त आजको विषमता र पितृसत्ताको चर्को दबदबाको मूल स्रोत के हो र किन हो भन्ने हो ।
वैकल्पिक यथार्थको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने हो । यस विषयमा एउटा छुट्टै बहस आवश्यक पर्ला । आज यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय भने साधारण छ : किन इतिहासमा पुरुषमात्र होइन महिला पनि थिए भन्न हिचकिचाउँछन् इतिहासकारहरू ? हाम्रा निकट विगत हेर्दा लाग्छ त्यो इतिहास सिंगो समाजको होइन कि समाजका केही पुरुषार्थ प्रमाणित गर्न सफल लोग्नेमान्छेहरूको गाथा हो । इतिहासकारहरूले कुन त्यस्तो इरेजर फेला पारे जसले महिलालाई उनको भूमिकाअनुसारको परिच्छेदहरूबाट पनि मेटाइदिए । के यो सोचीविचारी गरिएको कार्य थियो ?
यहाँ इतिहास भन्नाले मैले मानवजातिको सिंगो विगत भन्न खोजेको हुँ । अलिक दूरको इतिहासको कुरा पनि गर्न खोजेको हुँ । ढुंगेयुगको पनि । अर्थात् पाषाणकालीन इतिहासको । वर्तमान यदि विगतको उत्पादन हो भने हालको लैंगिक विभेदको जरो त्यति परसम्म पुगेको पो छ कि ?
मूल प्रश्न यही थियो— महिला किन अदृश्य ? इतिहासमा महिला किन हराए ? यो मेरो अर्थात् एउटा विद्यार्थीको प्रश्न थियो आफ्नो प्राध्यापकलाई । पुरातत्त्व र प्राचीन इतिहासको ज्ञाता थिइन् उनी । उनकै ज्ञानको धरातल र कार्यहरूबाट प्रभावित भएर मैले उक्त प्रश्न गरेको थिएँ कुनै अनौपचारिक कफी गफ वा बियर सेसनमा । मानव उद्विकासमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने, झुन्डहरूको सामाजिक केन्द्रमा थिए महिला । आर्थिक र प्राविधिक आविष्कारका जननी थिए उनीहरू । तर, तिनै महिला आखिर किन हराए हाम्रा इतिहासका पन्नाहरूमा ?
यो सन् १९९६ को कुरा थियो । जवाफमा प्राध्यापकले थपक्क सुझाव दिइन् मार्गरेट एहरेनवर्गको ‘विमन इन प्रिहिस्ट्री’ आफ्नो पाठ्यसूचीमा समावेश गर्न । विश्वविद्यालयमा आफ्ना रुचिका केही सीमित पाठ्यसामग्री आफैंले पनि छनोट गर्न पाइन्थ्यो । यद्यपि सम्बन्धित प्राध्यापकको पूर्वस्वीकृति भने आवश्यक पर्थ्यो, खासगरेर त्यसको विषय सान्दर्भिकताका सवालमा । मैले त्यसै गरें ।
उक्त पुस्तकमा मैले भेटेको जवाफ सामान्य नै थियो । पहिलो कुरो त ती इतिहास पुरुषले लेखे, अर्थात् उनका कथा लेखे, उनलाई मन पर्ने कुरा लेखे । त्यसैले त इतिहासलाई उसको कथा अर्थात् हिज–स्टोरी (हिस्ट्री) भन्ने गरिन्छ नि ! दोस्रो कुरा, ती इतिहास लेख्ने पुरुषले असाधारण घटनाहरूको अभिलेखनलाई मात्र महत्त्वपूर्ण ठाने ।
दैनिक जीवनका कथाहरू त्यस्तो इतिहासमा अभिलेखन गर्नलायक ठानिएन । जति महिला इतिहासमा उल्लेख गनलायक ठानिए ती पनि तिनै असाधारण कारण वा परिणामका लागि लायक ठानिएका हुन्थे । सामान्य महिलाका दैनिक जीवनका कथाहरू लेखिन योग्य ठानिएनन् । पितृसत्ताको लेन्स भएको चस्मा जतिसुकै पावरको भए पनि देख्ने यथार्थ उही हो । हाम्रा इतिहासकारका चस्माको लेन्स नै दोषी थियो सायद । दोषी लेन्स । अर्कातिर इतिहास लेखनको पद्धति पनि खोटी थियो सायद । खोटी पद्धति ।
म मानवशास्त्रको एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले पढ्न चाहेको इतिहास त समाजको थियो, आम मान्छेका दैनिक जीवनका साधारण कुराहरूको थियो । मेरो रुचि त कसरी मानव समाज हिजोको ढुंगेयुगबाट यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरामा थियो । समाज विकासको यो उपक्रममा महिलाको भूमिक के रह्यो होला भन्नेमा थियो ।
यसरी म साधारण प्रश्नको खोजमा विगतमा तानिएको थिएँ । विगत अध्ययन मेरा रुचि थिएन । रुचि त लैंगिक विभेदको जरो कहाँ छ भन्नेमा थियो । त्यो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा थियो त्यसैले नै तानेर विगतमा पुर्‍याएको हो । सिकारी युग अर्थात् कृषि युग सुरु हुनुभन्दा अगाडिको कुरा जति बेला मान्छेहरू घुमन्ते फिरन्ते जीवन बाँच्थे, जनावरको सिकार गर्थे, कन्दमूल बटुल्थे जीवन निर्वाहका लागि, अंग्रेजीमा हन्टिङ ग्यादरिङ ।
सिकार मूलत: पुरुषहरूको काम थियो र कन्दमूल खोज्ने महिलाहरूको । ‘म्यान : द हन्टर’ भनिन्थ्यो त्यसैले । तर त्यतिबेला पनि मान्छेको खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा कन्दमूल संकलनबाट आउँथ्यो, सिकारबाट होइन । त्यसो त महिलाले पनि साना जनावर, फटेंग्रा आदिका सिकार त गर्थे नै । यसरी जीविकोपार्जन र सभ्यताको विकासमा महिलाको भूमिका अहं थियो ।
अहिले पनि फिरन्ते जीवन बाँच्ने, खोजी–बटुलीमा निर्वाह गरिरहेका कालहारी मरुभूमिका कुंग महिलाले ६० देखि ७० प्रतिशत कुल खाद्यान्न सकंलन गर्छन् भने सिकारले ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र धानेको हुन्छ । खोजी–बटुली गर्दा महिलाहरूले एक घण्टामा औसत २४० क्यालोरी र सिकारबाट पुरुषहरूले १०० क्यालोरी बराबर जोहो गर्न सक्थे । यसरी एकातिर महिला प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्थे भने अर्कातिर कुन कन्दमूल खान हुने र कुन खान नहुने विषालु हुन्छ भनी चिन्ने सीप र सक्षमता पनि महिलामा हुन्थ्यो ।
महिलाको भूमिका प्रमुख थियो मान्छेको जीवन निर्वाह र निरन्तराताका लागि । तर त्यही युगलाई चिनाउँदा हन्टिङ पहिले आयो र ग्यादरिङ पछि । पुरुषको काम प्रथम र उन्नत । महिलाको काम द्वितीय र कमजोर ठानियो । दोषी लेन्सको कमाल । हाम्रोमा अनुवाद भएर आउँदा त सिकारी युग मात्र भनियो । सामान्य लाग्ने यस्ता कुरो इतिहासमा महिला अदृश्य हुनुका असामान्य विम्बहरू हुन् ।
जेरेड डायमन्डले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टिल : द फेट्स अफ ह्युमन सोसाइटिज’ (१९९७) मा कटाक्ष गरे कि कृषिक्रान्ति इतिहासको एउटा ठूलै फरेब (फ्रड) थियो । पछि युवल नोहा हरारीले यसलाई आफ्नो किताब ‘स्यापियन्स’ को एउटा अध्यायको शीर्षक नै बनाइदिए : कृषि क्रान्ति इतिहासकौ सबैभन्दा ठूलो फरेब ।
महिलाका लागि त केही अपवादबाहेक कृषिको आविष्कार सामाजिक, राजनीतिक हैसियतका हिसाबले प्रतिक्रान्ति साबित हुन पुग्यो । पुरुषको स्वामित्वमा निजी सम्पत्ति र स्थायी परिवारको सुरुआतसँगैं निजी सम्पत्ति पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सन्तान चाहियो, पुरुषको पहिचान निरन्तरता दिने । यसो हुँदा महिलाको पहिचानसहितको सन्तान नहुने भए र यौन छनोटको अधिकार पनि खोसियो । यसरी सुरु भएको पुरुषको पहिचानसहितको वंश परम्पराको अवशेष हामी अहिले पनि प्रत्यक्ष देखि–भोगिरहेकै छौं । यद्यपि कृषिको आविष्कारमा भने महिलाको अहं भूमिका थियो ।
यसरी एउटा क्रान्तिले खोसेको महिलाको शक्ति र सान विगत १०–१२ हजार वर्षमा भएका अनेक क्रान्तिले पनि पुन:स्थापित गर्न सकेन । कृषिको सुरुआत मूलत: पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) को खाडी वरपर क्षेत्रमा करिब १२ हजार वर्षजति पहिले भएको थियो, अन्यत्र त्योभन्दा पछि । यसरी महिलाहरूले लाखौं वर्षसम्म उपभोग गरेर आएको स्वतन्त्रता एकै पटक गुमाए आफैंले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको क्रान्तिमार्फत । समयले यस्तो क्रूर मजाक पटकपटक गरेको छ ।
फरक–फरक कारण होलान् तर इतिहासमा महिला हराए वा अदृश्य बनाइए । अदृश्य महिलाहरूलाई दृश्यमा ल्याउने कार्य अर्थात् हराएका महिलाको खोजी निरन्तर भइरहेको पनि छ । खोज आवश्यक र अनिवार्य छ । ताकि हामी हाम्रो विगतको सही र पूर्ण इतिहास पढ्न सकौं । जति विगतको यथार्थ बुझ्न सकियो त्यति नै वर्तमानको जटिलतालाई बुझ्न सकिन्छ र परिकल्पना गरिएजस्तो भविष्यको योजना गर्न सकिन्छ ।
यदि सन्धानकर्ताले पितृसत्ताको लेन्स हटाउने हो भने पनि दृश्य अलिक खुल्दै आउँथे । धेरै महिला इतिहास अनुसन्धान र लेखनमा सहभागी हुनु अर्को अनिवार्य सर्त हुँदै हो । सामान्यजनका दैनिक जीवनका कुराहरू पनि इतिहासका महत्त्वपूर्ण अवयव हुन् भन्ने स्थापित गर्न सके माथि भनेझैं खुलेका दृश्यमा भूमिकासहितका महिलाहरू देखिन्छन् नै ।
मिथक र संस्कारहरू यस्ता शक्तिशाली अवयवहरू हुन् जसको समयसमयमा गलत व्याख्या गरिन्छन्, विगतका बारेमा खास धारणा बनाउन । कतै यस्तै मिथक र संस्कारको आडमा महिलालाई अहिलेकै थान्कोमा बस भन्ने प्रपञ्च त रचिएका छैनन् । मिथकहरू विनिर्माण गरिनुपर्ने बेला पो भएको हो कि ?
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ १०:२३
प्रधानमन्त्रीले इतिहासको अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ : इतिहासविद् पन्त